कतै तपाईले खाने मह नक्कली त होइन ? यस्ता छन्, ४ विशेष तरिका सक्कली चिन्ने (भिडियो सहित) – Hamrosandesh.com
कतै तपाईले खाने मह नक्कली त होइन ? यस्ता छन्, ४ विशेष तरिका सक्कली चिन्ने (भिडियो सहित)
मह तपाईको स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ तर आजकल बजारमा उपलब्ध मिलावटी मह जताततै बिक्री भैरहेको छ । यस स्थितिमा मह खानुको कुनै फाइदा छैन, यसकारण तपाईले यो जान्न आवश्यक हुन्छ कि वास्तवमा सक्कली र नक्कली मह कसरि पहिचान गर्ने?
हुनत: सक्कली र नक्कली मह हेर्दा उस्तै लाग्छ, यसकारण यसको पहिचान गर्न थोरै कठिन हुन्छ । नक्कली महमा शुगर सिरप, कोर्न सिरप र विभिन्न फ्लेभर मिलाएर यसलाई सक्कली जस्तो बनाउने कोशिश गरिन्छ । यसकारण आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, सक्कली र नक्कली मह पहिचान गर्ने केही सहज ४ उपायहरू बारेमा, जुन यस्ता छन् ।